Madaxweyne Waare:- “Qorshaha ka bixista AMISOM ee Hirshabelle Hurdo ka toos ayuu noo yahay” – Radio Daljir
Madaxweyne Waare:- “Qorshaha ka bixista AMISOM ee Hirshabelle Hurdo ka toos ayuu noo yahay”
Febraayo 21, 2019 8:41 b 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Dr; Maxamed Cabdi Waare, ayaa raja wanaagsan ka muujiyay in ay howlahooda nabad ilaalineed ka sii wataan Hirshabeelle Ciidanka Burundi ee qeybta ka ah hol-galka Midowga Afrika ee Amisom.
Mudane, Waare ayaa sheegay inay in dedaallo badan oo ay sameeyeen ka dib u suurto gashay in wax laga beddelo qorshihii ahaa in ay mar qura ka baxaan 1000 Askari oo ka tirsan Ciidanka Burundi, gaar ahaan degaanno ka tirsan Gobolka Shabeellada dhexe.
Madaxweyne , Waare oo wareysi siinayay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA, ayaa sheegay in safarkii uu Madaxweynaha Dalku dhawaan ku tagay Dalka Burundi uu qeyb ka ahaa wax ka beddelka jadwalka ay Ciidanka Burundi doonayeen in ay kaga baxaan Hirshabeelle.
Galmudug oo gacanta ku dhigtay hub loo waday Kooxda alshabaab (Sawiro)